I-IWCA Dissertation Grant - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Zamazwe Ngamazwe
Njalo ngonyaka ngo-Ephreli 15.
I-International Writing Centers Association (IWCA) isebenza ukuqinisa umphakathi wesikhungo sokubhala kuyo yonke imisebenzi yayo. Inhlangano ihlinzeka nge-IWCA Dissertation Research Grant ukuxhasa abafundi abafundela ubudokotela njengoba besebenza ekubhaleni iziqu ezihlobene nezikhungo. Lesi sibonelelo kuhloswe ngaso ukuthi sikhokhele izindleko ezitholwe ngamalungu abafundi asafundela ubudokotela asebenzela ukuphothula iziqu kanye neziqu zobudokotela. Izimali zingasetshenziselwa izindleko zokuphila; izimpahla, izinto zokwakha, nesoftware; ukuhambela izindawo zokucwaninga, ukwethula ucwaningo, noma ukuhambela izingqungquthela noma izikhungo ezifanele kulo msebenzi; nezinye izinhloso ezingamboziwe lapha kepha kusekela umfundi owenza iziqu. Abafundi bezobudokotela abane-prospectus evunyelwe futhi abakunoma isiphi isigaba sokucwaninga / ukubhala ngaphesheya kwe-prospectus bayakhuthazwa ukuthi basebenzise.
Abamukeli be-Grant bazothola isheke lama- $ 5000 kusuka ku-IWCA lapho bekhethwa njengompetha wemiklomelo.
Uhlelo lokusebenza kufanele luhanjiswe ngumnqamulajuqu odingekayo ngokusebenzisa i- Iphothali Yobulungu be-IWCA. Amaphakethe wohlelo oluphelele azoqukatha izinto ezilandelayo kufayela elilodwa le-pdf:
Incwadi esembozweni ibhekiswe kusihlalo wamanje wezibonelelo othengisa ikomidi ngezinzuzo ezihlanganyelwe ezizovela ekusekelweni kwezezimali. Ngokuqondile, incwadi kufanele yenze okulandelayo:
Cela ukucatshangelwa kwe-IWCA kwesicelo
Yethula umfakisicelo nephrojekthi
Faka ubufakazi beBhodi Yezokucwaninga Yezikhungo (i-IRB) noma enye imvume yebhodi yokuziphatha. Uma ungaxhunyanisiwe nesikhungo esinenqubo efana nale, sicela ufinyelele kuSihlalo Wezibonelelo Nemihlomulo ukuze uthole ukuholwa.
Chaza izinhlelo zokuqedwa kwephrojekthi
Izincwadi ezimbili zokubhekisela: Eyodwa evela kumqondisi wencazelo futhi eyodwa ivela kwilungu lesibili lekomidi le-dissertation.
Vuma ukwesekwa kwe-IWCA kunoma isiphi isethulo noma ukushicilelwa kokutholakele kocwaningo
Dlulisela ku-IWCA, ngokunakekela uSihlalo weKomidi Lezibonelelo, amakhophi okushicilelwa okuvelayo noma izethulo
Faka umbiko wenqubekela phambili ku-IWCA, unakekelwa uSihlalo weKomidi Lezibonelelo, ngenxa yezinyanga eziyishumi nambili zokutholwa kwemali yesibonelelo.
Ekuqedeni kwephrojekthi, thumela umbiko wokugcina wephrojekthi kanye ne-PDF yencwajana egcwalisiwe kwiBhodi le-IWCA, ngokunakekelwa nguSihlalo weKomidi leZibonelelo
Cabanga ngokuqinile ukuhambisa umbhalo wesandla osuselwa ocwaningweni olwesekiwe kwenye yezincwadi ezihambisanayo ze-IWCA: Ijenali Yokubhala, noma ku Ukubuyekezwa Kontanga. Zimisele ukusebenza nabahleli (aba) kanye nababuyekezi (ama) ukuze ubuyekeze umbhalo wesandla ukuze ushicilelwe
2021: Yuka Matsutani, “Ukulamula Igebe Phakathi Kwethiyori Nokuzijwayeza: Ucwaningo Lokuhlaziya Ingxoxo Lwemihlahlandlela Yokusebenzelana Nemikhuba Yokufundisa Esikhungweni Sokubhala Senyuvesi”
2020: UJing zhang, "Ukukhuluma Ngokubhala EChina: Izikhungo Zokubhala Zisiza Kanjani Izidingo Zabafundi BaseShayina?"
2019: ULisa Bell, "Training Training Tutors to Scaffold with L2 Writers: An Action Research Writing Center Project"
2018: ULara Hauer, "Translingual Approaches to Tutoring Multilingual Writers in College Writing Centres" kanye noJethi Newman, "Isikhala Esiphakathi: Ukulalela Ngomehluko Emhlanganweni Womphakathi Naseyunivesithi Yokubhala"
2017: UKatrina Bell, "Umfundisi, Uthisha, Isazi, Umphathi: Imibono Yabacwaningi Abathola Iziqu Zamanje ne-Alumni"